Madaxweynaha oo maanta kormeeray xarunta gaadiidka gurmadka degdega ee Muqdisho – Radio Muqdisho
Madaxweynaha Jamhuuriuyada Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Shekkh Maxamuud ayaa maanta kormeeray xarunta gaadiidka gurmadka deg dega ah ee Muqdisho.
Madaxweynaha J.F. Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, waxaa la socdey guddoomiyaha gobolka ahna Duqa Muqdisho, kormeerka koowaad waxa lagu soo indha-indheeyey Shaqaalaha gurmadka deg-degga iyo baabuurta Dab-damiska ah oo u diyaarsanaa shaqadoodii, kuwaas oo qeybo kale u kala baxa, waxaa ka mid ah Qeybta Makaanikada iyo howlaha deg-degga ah ee gobolka uu u baahan yahay.
Xarunta waxaa ku dhex-yaalla Sheybaarka howlaha deegaanka oo shaqooyin kala duwan qabta, madaxweynuhu waxa uu warbixinno ka dhageysanayey dhallinyaro aqoon-yahanno ah oo heysta darajada Mester-ka, maamulka gobolka Banaadir ayaana ka faa’ideysanaya aqoontooda, waxa ay madaxweynaha J. Soomaaliya u sheegeen in fursaddaan uga mahadcelinayaa dowladda uu hoggaamiyo.
Qeybta ugu muhiimsan waa tababarrada dhallinyarada oo nooc walba isugu jira dhallinyaro gabdho iyo ragba leh, waxaa ka socdey tababar ku saabsan xallinta khilaafaadka, madaxweyne Xasan Sheekh markii uu tagey su’aallo ayuu weydiiyey dhallinyaro aad u da’yaraa oo tababarka qaadanayey, si ay wacyigelinta bulshada qeybta ugu xooggan uga qaataan. cod M.
Mar kale oo uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kormeerray dhallinyaro barata maadooyin kala duwan, waxa ay u sharraxeen qeyb ka mid ah waxyaabaha ay bartaan oo uu aad ugu qancay.
Madaxweynaha J. Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo dhallinyarada la hadlayey ayaa sheegay sida ugu wanaagsan ee ay uga qeyb-gali karaan mashruuca dalkaaga dhiso oo la doonayo in dhallinyarada ay hormuud u noqdaan, bulshaduna ay ku baraarujiyaan.
“Ujeedada waa in shaqooyin loo abuuro dhallinyarada, daruufaha gaarka ahna waa laga baxayaa, dowladda waxaa ka go’an tahay ay dhammeystirto olollaha ugu weyn ee shaqo abuurka dhallinyarada loogu sameynayo,” ayuu yiri madaxweynaha
Shirka Gudoomiyaasha Maxkamadaha sare ee Wadamada Carabta oo Masqat ka furmay, Soomaaliyana oo ka qayb galaysa ''SAWIRRO''